BETSIMITATATRA — Tsara Soratra
Harivariva antanin'olona izato izy ka faly sahirana! Lavi-podiana tokoa a!
Etsy ange misariha akalana dia manatona an'i Nenibe e. Ndeha isika mianaka hitety ny havoanan'i Betsimitatatra mody masoandro fa tsy ho ela ianao dia hanainga hiampita ranomasina lavitra any indray. Tsia, tsy hivezivezy lavitra ho aiza akory re isika e . Ny maso no hanesy ny fara-vodilanitra manoloana ka adalan'izay tsy mankafy. Mahafinaritra o? Misava tsy nahy ny havesatrin'ny saina mibanjina an'i Betsimitatatra. Vohitsara sa Voromahery?
Endrey ireto tanimbary midadasika! Sangisangian'ny tara-masoandro efa mihilana ka mandray tentina marevaka miofohofo hatrany. Manakoako koa moa ny feon'ny ankizy manao fanenjika sy miventy "Tao-katsaka tanim-parihy..." etsy Ambanin' Ampamarinana.
Io antehezan-kavoana kosa, saloran' ny ala maitso matevina, io Antsahadinta, vohitr'Andriana. Efa nozahantsika io tamin' ny ianareo mbola kely. Nihanika an-tongotra teo antsinanan' ilay lohasaha maitso mivalona eo avara-tanàna isika. Tsaroanao ilay vonin-draozy nanintona ahy teo an-tokonana?
Itsy kosa i Soavina ary ao atsimotsimo ao no misy ny tanindrazantsika, Ankadivoribe. Fantatrao moa fa tsy ampy indray mahamasa-bary avy eo amin' ny fasana no misy an'Ambohimasimbola, nipoiran'ny mpanjakan'ny Merina? Malaza noho izany iny Vakinisisaony iny. Jereo iry renirano miolakolana miantsinanana mamonjy an'Ikopa. Io tandrify azy andrefana io i Vontovorona. Io atsimo kelin'ilay dongona hafa kely io. Toy ny mofo mamy hoy ianareo taloha. Eny anie hono no hanaovana izany "Tanambao" e. Efa mba ho vita kosa angamba izany rehefa mody ianareo efa-mianaka rahatrizay.
Rehefa faran'ny taona toy izao, dia eny amin'iny faritra iny no milentika ny masoandro. Mampirenty ny endriny tsara indrindra izy amin'izay ka miova arakarakin'ny fivangongon'ny rahona. Velariny amin'izany ny taratra mivolo-mena isan-karazany ka miantefa mamiratra ery Andohalo sy Faravohitra ny mena vondroka, fify, haboka, mivolom-bolamena, ary vololona. Raha mizaha tsara ianao dia hita eny antsefatsefan-drahona eny, ny tsipika maitso mavana miserana vetivety toa misangy ny maso. Amin'izay ny faravodilanitra mifanandrify amin'i Fenoarivo iny dia toa misalotra voaly volomparasy manify dia manify. Endrey izany hasoavana….
Jereo any amin' ny farany andrefana fa hita manangasanga eo ambadik'Iharana, misarisary malefaka dia malefaka ny tendron'Ambohimiangara. Hitanao io? Teny hono teo amoron' ny farihin' Itasy no faran'Imerina fahagola. Ary teo an-tampony no nitoetra i Rapeto sy ny vadiny . Io havoana misarisary trafon' ombalahy somary ankavananany io no Antongona. Teo no tsinjo mazava ny afo fanairana fa niakatra ny fahavalo avy any Bongolava. Lasa fiteny moa ny hoe "Efa ho lava toy ny afon' Antongona." Mbola hihanika eny isika hitety ny vavahady fito . Sady hamangy an-dry Nenitoa any Imerintsiatosika isika alohan'ny handehananareo. Eny tokoa. Misy mofomamy hafa koa io. Io indray dia Ambohibola ka any Imamo no misy azy.
Eto atsinanana kosa misy toraka havoana mbola maitson'ny hazo kesika. Ambohitrandriana io . Vao tsy ela izay no nirehitra ireo ala ireo ka ontsa ny fo nijery izany avy ety. Tsaroandry isika nividy trondro teo Ambatomirahavavy rehefa mitsangatsangana tany ? Mbola ao foana ireo mpivarotra.
Mbola midadasika iny avaratra iny a! Lemaky Katsaoka sy Andromba izao ireny hita ireny fa miakatra ny rano. Tsia, Ikopa ity afovoany eto anoloantsika . Tondraka ny rano ka hita tsara izy menan'ny atsanga, misosa malefaka mianavaratra. Eo andrefany jereo tsara fa moa ve tsy toy ny andriandahy milahatra manaja an'Analamanga? Ambohidrapeto, Ambohitrimanjaka sy Anosimanjaka ary indrindra I Ambohimanoa. Jereo izato famendrehany.
Fantatr' indriko moa, fa raha saika hifandramatra hono i Ankaratra sy Andringitra tany aloha elabe tany, dia Ambohimanoa no nampihavana? Hafa kely samy havoana Ambohimanoa anaka. Manirery. Amin'ity tendrony hazo vitsivitsy tsy laitrin'ny taona. Hazo inona re ireo ? Tsara ho halalinina. Raha mbola eto afovoan'Imerina ihany aho retsy, dia miherikerika hatrany sao mahatsinjo an'io tendrony io, mba hamaharan'ny fo sy ny saina. Ny any aminay…
Satria maninona? Raha miampita ny rano eo ambany andrefan'Ambohimanoa , eny Bevomanga, ka mananika miankandrefana ho any Ambohimasina, dia ao an-tehezana ao Ambohitritankady. Vohitra kely iray.
Ao andrefana ao, sahabo indray mahamasa-doaka no hivarinan'Ikopa ao Farahantsana. Misy azy ny rano ao amin' ity orana tsy mitsahatra.
Rehefa ririnina mamirifiry iny kosa anaka, dia eto an-davarangana izahay ny dadabe no manoko toerana. Eny amin' ny vodilanitra tandrify an'Ambohimanoa iny mantsy no milentika ny andro. Tonga miantefa eny amin' ny rindrina ao an'efitrano avaratra izy amin'izay ka mitondra hafanana soavina tokoa.
Raha mitohy mijery mianavaratra ianao dia io I Lovohitra, misy mondrony kely io, ary eo atsimony i Babay. Tsaroanao ilay fiteny hoe : "Vonjeny daholo I Babay sy Lovohitra"?
Dia manatona antsika itsy kosa Ambohidratrimo, io avaratr'Ambohimanarina io. Vohitrandriana Ambohidratrimo ary misarisary toy an'Antsahadinta ihany.
Oadray, mandehana aloha ao an-tany, jereo raha masaka ny koba. Mitondra tanty hasiantsika ny ravina.
Tsara o? Hano fa vokatrin'ny tany. Ny vary avy any Ankadivoribe. Ny akondro avy atsy atsimon-trano. Efa ela no naotrika fa niandry anareo e!
Tohizana ny fitsangatsanganan'ny maso? Ka inona ary iry manangasanga ery avaratra ery o? Ngitangita tendro, manintona maso. Marina mihitsy ilay fiteny hoe "Any Andringitra ny masonao ka tsy mahita ny aleha." Eo anelanelan'Andringitra sy Ambohimarina ity mivelatra eo anoloan'Ivato ity no misy an' Antanety tanindrazantsika koa.
Ie! Ivato io mamirapiratra eo andrefan'i Laniera io. Dia io eo amoron-drano avaratra io Ambavoraka! Hitan-driko? Raha topazana ambony ny maso dia Merimandroso no eo avaratra .
Ary io tendro kely andrefana io Ambohipoloalina. Tsinjo tsara avy any ambadiky Ambohimanga izy io ka asa raha tafapaka tany aminy Miangaly teo ambodin' ny valanirana ny ventso nalefan' I Mboasalama. " Sa I Miangaly no manina" ? Tsy Amboatany mihitsy aloha no nanao vato misakana ny hanina mety nampitaina teo e!
Iry farany sisiny avaratra hitantsika iry? Vohitrandriana koa io satria maitso mavana. Ambohimanga. Rehefa mitatao vovonana iny ka mibaliaka ny masoandro dia tazana tsara avy ety Ambatomiatendro. Namela vatovato fahatsiarovana teo isika fony mbola zaza ianareo. Tadidinao va re? Io ambadika io? Langana…Toy ny miaro an' Ambohimanga amin' ny avy any avaratra izy. Avo koa io tendro iray io. Any ambadibadika any raha avelanao hiriaria ny sarin-tsainao no misy an' i Kaloy, tanana kely nahaterahan'Andrianampoinimerina. Mahafinaritra ahy ilay hoe Kaloy.. Kaloy.. Miangaly…
Izay ihany no fara hitantsika roa eto fa mbola misy an'Imerina rehetra any. Mila mankeny Ambohimanoro ve vao hahita an'Ilafy sy Ambohitrabiby ? Ary mankeo aminy Fitsarana vao mahita an' Ambohimalaza sy Merimanjaka? Ho tatanandriko aho dia hijery izany isika.
Fa ny anio dia andeha hiditra fa manaikitra ny moka.
Izany no aty amintsika anaka ka ento atao vatsin-dalana rehefa mitodi-doha ho any ampita ianareo mianakavy kely. Ataovy trafon-kena ome-mahery ka ambava homana, ary am-po mieritreritra. Rehefa tanindrazana, anaka, no resahina dia tsy misy afa-tsy ny voa mahatsiahy no arapaka. Koa modia aina sy tanjaka iatrehanareo ny any.
tagged with sombintantara, jeografia, tantara